Daacish oo sheegatay dilkii Bossaso ee afar Itoobiyaan ah iyo dhaawaca hal qof – Radio Daljir
Oktoobar 2, 2018 2:07 g 0
Kooxda Daacish ee buuralayda Golis ee gobolka Bari ayaa sheegatay masuuliyadda dilkii xalay Bossaso ee afar Oromo ah iyo dhaawaca hal qof. Sheegashada Daacish ayaa lagu baahiyey bartooda internetka ee Amaq News.
Ciidamada amniga ee gobolka bari ayaa baadigoob ugu jira koox la sheegay in ay bastoolado ku hubeysnaayeen, waxaana maanta illaa xalay howlgal Bossaso ka socday lagu soo qabqabtay dad looga shakiyey weerarkii xalay.
Amniga magaalada Bossaso ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu ahaa mid sii xumaanaya, waxaana dhowr jeer oo hore magaalada lagu dilay dad isugu jira askar, ganacsato, iyo waliba dhalinyaro ka qalinjabisay jaamacadaha Bossaso.
Maamulka iyo ciidamada amniga gobolka ayaa sheegay in dilalka Bossaso loo soo qabqabtay qaar kamid ah fuliyayaashi falkaas, dhawaana maxkamad la soo taagi doono.
Qalbidhagax oo gaaray Qardho (dhegayso)